Kupokana pakati peSCO neIBM kwekutyorwa kwekodzero kunogadziriswa zvishoma | Linux Addicts
Kusawirirana pakati peSCO neIBM kwekutyorwa kwekodzero kunogadziriswa zvishoma
Darkcrizt | 15/11/2021 15:22 | Noticias
Mukati memwedzi mishoma yapfuura takagoverana pano pa blog kutevera Panyaya yekukakavadzana pakati peSCO neIBM iyo yakatora makore angangosvika makumi maviri nekuda kwekutevedzana kwemhosva dzakaitwa pamusoro peiyo copyright yeUnix.
Zvese zvakatanga muna 1995 nekutengeswa naNovell yeUnix kodhi ku iyo kambani SCO (mutengesi weUNIX wex86 processors). Huwandu hwekutengeserana hwaive hwakapoteredza madhora zana nemakumi mashanu emamiriyoni. Kutengesa uku kwakagadzira dudziro mbiri pakati pevatori vechikamu. Novell anotenda kuti yakangoendesa kodhi chete, kwete kodzero dzepfuma yehungwaru, ukuwo SCO ichiti yakatenga ese ari maviri.
Muna 1998, IBM, Santa Cruz Operation, nevamwe vakaungana kuti vagadzire Project Monterey, nechinangwa chekugadzira vhezheni yeUNIX inomhanya pamapuratifomu akawanda ehardware. Izvo nharaunda yeLinux yakanga yatanga kuita zvakare.
Muna 2001, IBM yakafunga kuti Linux yaive ramangwana uye yakasiya iyo Project Monterey, kunyange kukwevera vamwe veProjekti Monterey vatori vechikamu mukumuka kwayo. Panguva iyoyo, Big Blue yakanga yagadzira vhezheni yekuyedza yeyayo system. AIX inoshanda yakafanana neUNIX yakashandisa SCO kodhi. AIX ndiyo Unix-like operating system yakabudiswa neIBM kubvira 1986. AIX inomirira Advanced Interactive executive, zvisinei kuti acronym chete ndiyo inoshandiswa.
Asi paakangosiya chirongwa cheMonterey, IBM yakaendesa imwe yeruzivo rwayo kuLinux. SCO yakaramba kune iyi mipiro nekuti yaitenda kuti IBM yakasiya midziyo yayo kuLinux yakavhurika sosi codebase.
Uyezve, musi waKurume 6, 2003, Caldera Systems, yakatumidzwa zita rekuti SCO, yakaunza chiito kupokana IBM yekutyora chibvumirano chepurojekiti yavo yeMonterey iyo yaireva kuvandudzwa kwakabatana kweiyo Unix inoshanda system. Mumhan'ari akapomera Big Blue kunyanya kuburitsa imwe Unix source code uye nzira dzekupa kuLinux uye nekugadzira AIX.
Pakutanga achida $ 1 bhiriyoni mukukuvadza, kuda kwake kwakawedzera nekukurumidza mumwedzi mitatu kusvika $3 bhiriyoni. Ziva kuti gore rimwe chetero SCO yakarwisawo Novell nekuona zvisiri pamutemo kubva kuUnix sosi kodhi muLinux, ichiti $ XNUMX bhiriyoni yekutyora patent.
Yakarwiswa zvakare neIBM muna Nyamavhuvhu 2003 muUtah federal court uye kumutsa kuchema kusati kwamboitika munyika yeIT (kubva kuFree Software Foundation kuenda kuNovell, kusanganisira vashandi vayo), SCO yakakurumidza kuwanikwa mumamiriro asina kunaka.
Iye zvino anoda $5 bhiriyoni kubva kuIBM, kambani yakaenda kureba muna Chikunguru 2004 kuti itaure zvichemo zvayo zvekuti imwe kodhi yayo yaiverengerwa muUNIX inotemerwa uye JFS faira system inosunga fomati. Kana kuti init, inowanikwa zvisiri pamutemo muLinux kernel.
Muchokwadi, kunyangwe SCO yakabhuroka, pfuma yayo yehungwaru yakaramba ichirarama pasi pevaridzi vatsva. IBM yakaramba ichirwa, uye masangano akagara nhaka yehungwaru hweSCO akaramba achiedza makona matsva, kutsvaga mitsva yekutsvaga mari, kana zvese zviri zviviri. Xinuos, iyo yakatora midziyo yeSCO makore gumi apfuura, yapandukira IBM. Big Blue inopomerwa zvakare, panguva ino naXinuos, yekukopa zvisiri pamutemo kodhi yesoftware iyo yekupedzisira yakatenga kubva kuSCO kuti ishandise muhurongwa hwayo hwekushandisa.
Xinuos, iyo inotengesa UnixWare neOpenServer, yakamhan'arira kutanga kwegore rino mhosva yekubirwa kwepfuma yehungwaru uye mubatanidzwa wemusika wekupokana nevanopomedzerwa pamwe IBM neRed Hat. Xinuos yakaumbwa yakatenderedza SCO Boka zvinhu angangoita makore gumi apfuura pasi pezita reUnXis, uye panguva iyoyo, mutsivi weSCO akange asina kufarira kuenderera mberi kwegakava rekupedzisira pamusoro peLinux.
Mhosva iyi inoti IBM yakabatanidza kodhi isina kutaurwa kubva kukambani UnixWare uye OpenServer kodhi mune IBM's yega AIX system yekushandisa. Inotiwo IBM neRed Hat vakarangana kupatsanura iyo Unix-senge yekushandisa system musika kuita yakakosha bhizinesi mikana yeBM, ichisiya Xinuos murima.
Zvinotonyanya kushamisa, kambani iyi inoti IBM inotsvaga kuparadza FreeBSD yakazara: "zano reBM neRed Hat rave riri pachena kuparadza FreeBSD, iko kwakavakirwa zvitsva zveXinuos."
Uye anoenderera mberi nekutsvaga kwete kukuvadzwa chete, asi kubviswa zvachose kwekutorwa kwe IBM kweRed Hat: "Kubatanidzwa kunofanirwa kunzi kusiri pamutemo kutyora chikamu chechinomwe cheClayton Act, uye IBM neRed Hat dzinofanirwa kurairwa kuti dziparadzanise nekudzima. zvese zvibvumirano zvakabatana pakati pavo ”.
Utah District Court yakazopedza nyaya yacho yeSCO kurwisa IBM.
Maererano neDare, sezvo:
“Zvese zvichemo uye zvichemo munyaya iyi, zvinopomerwa kana kuti kwete, zvinopomerwa kana kuti kwete, zvakagadziriswa, zvinokanganiswa uye zvinogadziriswa zvizere, uye zvichipindirana nechikonzero chakanaka. ZVINOMIRA NEZVINO KUTI chikumbiro chemapato CHIPEWE ... Mapato achazvibhadharira ega mari nemitengo, kusanganisira mari yemutemo. Munyori ndiye anoona nezvekuvhara chiitiko ”.
Musi waNyamavhuvhu 26, 2021, chikumbiro chekugadzirisa kubva kuUnited States Bankruptcy Court yeDunhu reDelaware inoratidza kuti mapato "akabvumirana kugadzirisa kusawirirana kuri pakati pavo kuburikidza nemubhadharo kumutungamiriri (...) we $ 14,250,000" mukati meshanu. mazuva ebhizinesi kubva pazuva rekushanda rechibvumirano chekugadzirisa. Zviripachena, kana chikumbiro ichi chakagamuchirwa nemapato ese, chibvumirano ichi chaizopedza mhosva yaimbova SCO neIBM. Mumazuva mashanu, IBM ichafanirwa kubhadhara iyo $ 5 miriyoni nekuendesa kune maneja anotungamira kubhuroka kweSCO, iyo yakatumidzwa zita rekuti TSG Group. Kune yekupedzisira, chirevo ichi chinoitwa nenzira inonzwisisika, tichifunga nezvezvakanakisa zvevakweretesi uye inofanira kubvumidzwa.
Mukudzoka, TLD inosiya kodzero dzese nezvido mune zvese zviri kuitika kana zveramangwana kurwisa IBM neRed Hat, uye chero fungidziro yekuti Linux inotyora SCO's Unix yehungwaru pfuma.
mabviro: Mutongo wedare
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Kusawirirana pakati peSCO neIBM kwekutyorwa kwekodzero kunogadziriswa zvishoma
Chrome 96 inosvika ine otomatiki redirection kubva kuHTTP kuenda kuHTTPS nedzimwe nhau
NPM inoenderera mberi nematambudziko ekuchengetedza uye ikozvino imwe yakakanganisa iyo yekuvandudza system